မိန်းကလေးနှင့် ရာသီနည်းခြင်းပြဿနာ - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အရွယ်ရောက်ပြီး အမျိုးသမီးတိုင်းဟာ တစ်လမှာ တစ်ကြိမ် ရာသီသွေးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့ Circle နဲ့ ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလို တစ်လတစ်ခါ ရာသီစက်ဝန်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာ ရာသီမှန်တဲ့သူရှိသလို မမှန်ဘဲ ၂လ ၃လနေမှ တစ်ခါသာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့လူလဲရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရာသီနည်းတဲ့သူရှိသလို သွေးဆင်းတာအရမ်းများလို့ အလုပ်ပျက်အကိုင်ပျက်ဖြစ်ရတဲ့ထိ များတဲ့လူရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကတော့ မတူနိုင်ပါ။ရာသီအနည်းအများဟာ သွေးအားကောင်းခြင်း မကောင်းခြင်း နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ပိန်တာ ဝတာ အပြင် အခြားအကြောင်းအရင်းများစွာပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကွဲလွဲတတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုတွေကြားထဲကမှ ရာသီသွေးနည်းရခြင်း အကြောင်းနဲ့ သွေးအားနည်းတာကို ဘယ်လိုကာကွယ်နေထိုင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကို ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။
5. အခြားရောဂါအခံရှိသူများ စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
– သံဓါတ်အားဆေး တနေ့တလုံး ပုံမှန်သောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ (eg. Tothema)
– အနီရောင်ရှိသော အသားများစားပေးပါ။
– သံပုရာသီး,ရှောက်သီး နှင့် အခြား အချဉ်ဓါတ်ရရှိသောအသီးများစားပေးပါ။
– ကန်စွန်းရွက်,ဟင်းနုနွယ်,မုန်လာဥနီ စသော အသီးအရွက်များ စားပါ
– ဥအမျိုးမျိုး,ငါးအမျိုးမျိုးနဲ့ နို့ , ဒိန်ခဲ,သွေးခဲ စတာတွေကနေလဲ သံဓါတ်ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။
– ရေများများသောက်ပေးခြင်း နဲ့ လမ်းလျှောက်ပေးခြင်း အားဖြင့်လဲ သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းမွန်စေပြီးခုခံအားကိုမြင့်တက်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
– အသားအရေ ဖြူဖျော့နေခြင်း
– စိတ်တို စိတ်ဆတ်လွယ်ခြင်း
– ခေါင်းအမြဲ မကြည်လင် မူးနောက်နေတတ်ခြင်း
– အစား စားချင်စိတ်မရှိခြင်း
– အာရုံမစူးစိုက်နိုင်ခြင်း စတဲ့ အချက်တွေ ကနေတဆင့် မိမိကိုယ်တိုင် သတိထား စောင့်ကြည့်နိုင်သလို သွေးစစ်ခြင်း ဆေးရုံဆေးခန်းပြသ၍ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း များပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Keys To Darken and Strengthen Hair
ကျန်းမာရေးအာမခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ယုံတမ်းစကားတွေအကြောင်း ပြောရအောင်